25 साधारण Windows 10 समस्याहरू र तिनीहरूलाई यकिन गर्न कसरी | Caseguru
25 साधारण Windows 10 समस्याहरू र तिनीहरूलाई यकिन गर्न कसरी पोस्ट : Jay अली Jay अली
अगस्ट 3rd, 2015 टिप्पणी छोड्नुहोस्
Newz, सुझाव र ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल
53चमक
विन्डोज 10 सबै र धेरै प्रयोगकर्ताहरू गर्न अब केही दिन पछि अब उपलब्ध छ पहिले नै स्थापना संग धेरै समस्या रिपोर्ट छन्, ध्वनि, सुरक्षा आदि. यो पोस्ट विन्डोज कुरा हुनेछ 10 समस्या र तिनीहरूलाई समाधान कसरी.
#1 विन्डोज 10 सिस्टम आवश्यकताहरु
यो एक PRELUDE को अधिक छ, तर यो तपाईं स्थापना मा अनावश्यक मुद्दाहरू रोक्न चाहनुहुन्छ भने थाहा महत्त्वपूर्ण छ. तपाईंको कम्प्युटर निश्चित स्तर संग बराबर सम्म हुन आवश्यक. यहाँ माइक्रोसफ्ट आवश्यकता चश्मे छ:
एक प्रोसेसर 1 gigahertz (Ghz) या छिटो
1 गीगाबाइट (जीबी) (32-बिट) वा2जीबी (64-बिट) राम
16 मुक्त हार्ड डिस्क स्पेस जीबी
माइक्रोसफ्ट DirectX9WDDM चालक संग ग्राफिक्स उपकरण
एक Microsoft खाता र इन्टरनेट पहुँच
#2 विन्डोज 10 डाउनलोड छैन
विन्डोज 10 डाउनलोड छैन
विन्डोज भएका प्रयोगकर्ता 7, 8 वा 8.1 विन्डोज डाउनलोड गर्न सक्षम हुन भन्ने विश्वास गरिन्छ 10 स्वतः कार्यपट्टी मा सिस्टम ट्रे मा उन्नयन आइकन क्लिक गरेर. तथापि, केही प्रयोगकर्ताहरु डाउनलोड संग कठिनाई थियो, वा अझै यसलाई डाउनलोड गर्न आधिकारिक गरिएको छैन (इन्टरनेट तोड छैन त माइक्रोसफ्ट बिस्तारै अपग्रेड बाहिर आउँदैछ छ).
प्रायजसो, समस्या विन्डोज को आफ्नो वर्तमान संस्करण पूर्णतया अद्यावधिक छैन किनकी सामना छ, र Windows अपडेट चलिरहेको समस्या solves.
कि असफल गर्नुपर्छ, तपाईं समस्या आसपास काम गर्न सक्छन् माइक्रोसफ्ट गरेको विन्डोज प्रयोग गरेर 10 मिडिया डाउनलोड उपकरण. यो सञ्चालन सिस्टम को एक .ISO फाइल डाउनलोड हुनेछ, त्यसपछि कोर्नु देखि सञ्चालन प्रणाली स्थापना गर्न एक USB ड्राइव या एक डीभिडी मा लोड गर्न सकिन्छ.
#3 विन्डोज 10 सक्रियता मुद्दाहरू
विन्डोज 10 सक्रियता मुद्दाहरू
प्रयोगकर्ता Windows को प्रारम्भिक दिनहरुमा रिपोर्ट छन् शायद सबैभन्दा मौलिक समस्या 10 यो स्थापित गरिएको छ पटक सफ्टवेयर सक्रिय मा एक कठिनाई छ. यो भन्दा बढि मौलिक मुद्दा कल्पना गर्न कठिन छ, र स्वाभाविक यस अन्तिम दिन या त भन्दा इन्टरनेट फोरम केही बरु चिडचिडा प्रतिक्रियाहरू नेतृत्व छ.
तथापि, निराशा सक्रियता मुद्दाहरू unquestionably हुनत, विन्डोज को मामला मा 10 यो अपेक्षाकृत painlessly तिनीहरूलाई समाधान गर्न सम्भव छ. वास्तवमा, माइक्रोसफ्ट सार्वजनिक सक्रियता सम्बन्धित कुनै मुद्दाहरू वास्तवमा केही मिनेट भित्र आफूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यसो गरेको छ. यो साधारण Windows यस बीचमा मामला हुन रिपोर्ट गरिएको छ 10 समुदाय, तर केही प्रयोगकर्ताका तैपनि अनुभवी स्थायी कठिनाइ छ. सधैं यो जटिल सफ्टवेयर रिलीज संग anomalies हुनेछ, हुनत, र unquestionably यो समस्या अनुभव गर्नेहरूका लागि एउटा उचित मार्ग स्थापना र फेरि प्रयास बस छ.
#4 विन्डोज 10 स्वचालित अद्यावधिक
विन्डोज 10 स्वचालित अद्यावधिक
मान्छे को एक धेरै माइक्रोसफ्ट नयाँ अद्यावधिक नीति बारे मा चिंता व्यक्त गरेको छ. विन्डोज गर्न अपडेट 10 अनिवार्य छन्, ताकि तपाईं डाउनलोड र तिनीहरूलाई स्थापित अप्ट आउट गर्न सक्दैन. त्यो तपाईं नवीनतम सुरक्षा पैच र समाधान संग स्थिर सफ्टवेयर छ मतलब गर्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीं यो समस्या पैदा गर्न जा गर्नुपर्छ. हामी पहिले नै glitches र Windows अपडेट बीच एक संघर्ष कारण दुर्घटनाहरु र NVIDIA के नवीनतम चालक देखेका छौँ, मुद्दा swiftly तय भएको थियो हुनत. माइक्रोसफ्ट गरेको परीक्षण माध्यम sneaking यो अनौठो बग अनिवार्य छ.
तिमी यो टाउको भने Microsoft समर्थन पृष्ठ तपाईं अनावश्यक चालक वा अद्यावधिक अस्थापना लागि निर्देशन पाउन छौँ. तपाईं पनि पाउन छौँ समस्या निवारक प्याकेज "देखाउनुहोस् वा अद्यावधिक लुकाउन". यो डाउनलोड, यो खोल, ट्याप गर्नुहोस् अद्यावधिक लुकाउनुहोस्, र त्यसपछि तपाईँले स्वचालित रूपमा स्थापित गर्न चाहँदैनन् र अद्यावधिक जाँच. तपाईं सधैं यो पछि फर्कन र ट्याप गर्न सक्छन् लुकेका अद्यावधिक देखाउन र त तपाईं पछि सबै स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं निर्णय गर्नुभएको केहि अनचेक.
तपाईं अद्यावधिक सेवा बन्देज फायरवाल प्रयोग र स्वतः अद्यावधिक देखि यो रोक्न सक्छ. यो समस्या तपाईं एक महिना भित्र आउनेछन् भन्ने अद्यावधिक स्वीकार नगरेसम्म माइक्रोसफ्ट नबीणीकरन पहुँच अलग्याएको नीति छ छ. तपाईं पछि तपाईं अवरोध थिए अद्यावधिक स्वीकार पहुँच पुनःस्थापित गरिनेछ, यसैले यो अझै अद्यावधिक छ कसरी स्थिर पत्ता लगाउन केही समय खरीद को एक तरिका हुन सक्छ.
#5 विन्डोज 10 ध्वनि समस्या
विन्डोज 10 ध्वनि समस्या
तपाईं एक RealTek चालक को स्थापना संग समस्या छ भने, मार्फत HD अडियो संग पूर्ण अडियो अनुभव प्राप्त छैन, या Conexant अडियो संग मुद्दाहरू, तपाईं प्रयास गर्न को लागि एक workaround त्यहाँ छ.
यो उल्टो क्रम मा यी तीन मुद्दाहरू मा एक हेरौं. Conexant अडियो संग एक समस्या विन्डोज मा कुनै आवाज सुन्न सक्छ भन्ने अर्थ 10 पनि सबै हुनत देखिन्छ सही काम गर्न. यस investigated भइरहेको बेला, माइक्रोसफ्ट msconfig.exe चलिरहेको र जुत्ता ट्याब शीर्षक सुझाव. उन्नत विकल्प बटन क्लिक गर्नुहोस्, अधिकतम स्मृति बक्स जाँच र गर्न मूल्य सेट 3072.
तपाईं मार्फत HD अडियो र पाउन भने तपाईं केवल केहि अनुप्रयोगबाट ध्वनि सुन्न सक्नुहुन्छ कि, एक फरक त्यहाँ छ workaround तपाईं को लागि. खुला पार्श्व उपकरणहरू, सही अडियो उत्पादन उपकरण क्लिक गर्नुहोस् र पूर्वनिर्धारित उपकरणको रूपमा यो सेट. यस डन संग, उपकरण चयन, हिट गुण, यस संवर्द्धन ट्याब सार्न र अक्षम सबै संवर्द्धन विकल्प जाँच.
अन्तमा, तपाईं समस्याग्रस्त RealTek अडियो ड्राइभर स्थापना संग plagued छन् भने — विशेष एक 0x000005b4 त्रुटि — तपाईं मा प्रकाशित एक workaround प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ स्टोन समर्थन पुस्तकालय. स्थापना गर्न अब चालक दिन समूह नीति सम्पादक प्रयोग गर्न गाइड त्यहाँ छ, या तपाईं क्लिक एक जोडी संग ठाँउ मा नयाँ सेटिङहरू राख्न एक रजस्ट्री फाइल डाउनलोड गर्न सक्छन्. यो काम गरिएको छ एकचोटि, तपाईं त चालक स्थापना पुन प्रयास गर्न सक्दछ.
#6 विन्डोज 10 सिस्टम दुर्घटना कारण बाध्य अद्यावधिक
यस बाध्य अद्यावधिक कारण अर्को समस्या तिनीहरूले आफ्नो कम्प्यूटर दुर्घटना सक्नुहुन्छ छ.
आफ्नो कम्प्युटर पुन: बुट मामला द्वारा एक मामला मा त्यो समाधान गर्नुपर्छ आधार. तपाईं पनि समस्या पैदा गर्नुपर्छ भन्ने चालक हटाउन.
#7 विन्डोज 10 क्रोम मुद्दाहरू
विन्डोज 10 क्रोम मुद्दाहरू
धेरै प्रयोगकर्ताहरू पनि संग प्रारम्भिक समस्या रिपोर्ट गर्दै क्रोम ब्राउजर. माइक्रोसफ्ट को बढत ब्राउजर को रिलीज संग आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजिङ प्रयासमा repackage प्रयास भएको छ तापनि, यो अझै पनि निगम लागि unquestionably खराब समाचार छ. क्रोम कट्टर इन्टरनेट प्रयोगकर्ता संग लोकप्रियता को धेरै प्राप्त गरेको छ, र यी ठीक Windows सञ्चालन प्रणाली को भएको प्रारम्भिक adopters गर्न स्वाभाविक संभावना हुन् मानिसहरूको क्रमबद्ध छन्.
दुर्भाग्यवश, धेरै क्रोम ब्राउजर प्रयोगकर्ता समस्या एक पुरा रापट अनुभव, bogging र सफ्टवेयर को slowdowns संग विशेष प्रचलित छलफल. यो क्रोम ब्राउजर केही downloaders लागि देखिन्छ, यस्तो भिडियो ओइरिरहेका रूपमा प्रोसेसर-गहन कार्य बस सञ्चालन छैनन्, तिनीहरूले गर्नुपर्छ रूपमा.
यो पक्कै पनि माइक्रोसफ्ट समय मा काम गर्दछ कि एक मुद्दा हुनेछ, तर अनुभव कुनै क्रोम मुद्दाहरू लागि एक प्रारम्भिक workaround ब्राउजर सम्बन्धित सबै एक्सटेन्सन मार्न छ. विन्डोज सम्बन्धित सबै समस्याहरू रूपमा 10, अस्थापना र क्रोम पुनर्स्थापित को सुझाव पनि एक प्रमुख एक भएको छ, र मदत गर्न सक्छ कि एक साधारण प्रविधी कुनै कठिनाइ वाले.
#8 विन्डोज 10 बाध्य अद्यावधिक सफ्टवेयर संघर्ष कारण
विन्डोज 10 बाध्य अद्यावधिक सफ्टवेयर संघर्ष कारण
यो बाध्य अद्यावधिक Windows को दूर trickiest पक्ष द्वारा छन् 10. एक Windows अद्यावधिक तेस्रो पार्टी चालक व्यवस्थापन सफ्टवेयर अपडेट संग coincides गर्दा उत्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने अर्को समस्या छ. यो एक दुर्घटना हुन सक्छ. तेस्रो पार्टी सफ्टवेयर halted सकिन्छ, तर विन्डोज अद्यावधिक गर्न सक्दैन.
तपाईंको सबै भन्दा राम्रो शर्त स्थापना रद्द तेस्रो पार्टी चालक व्यवस्थापन र दिँदै विन्डोज सबै सिस्टम अपडेट हेरविचार छ, जो अर्को कम्पनीको उत्पादनहरु भन्दा माइक्रोसफ्ट शक्ति दिन्छ.
#9 विन्डोज 10 मनपर्ने Disappearing
विन्डोज 10 मनपर्ने Disappearing
इन्टरनेट एक्सप्लोरर संसारमा सफ्टवेयर को सबै भन्दा गिल्ला टुक्राहरूको एक भएको छ, र Microsoft धेरै ज्यादा यसलाई अपडेट गर्न कर्तव्य-बाध्य ढिलो होस् भन्दा पछि थियो. यो नयाँ जारी छ भन्ने कुनै आश्चर्य त छ बढत ब्राउजर, र यो कार्यक्रम गर्न प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यो एकदम आफ्नो इन्टरनेट एक्सप्लोरर पूर्ववर्ती अधिक सुधार को छ.
तथापि, केही प्रयोगकर्ताहरू मनपर्ने आफ्नो सूची पत्ता समस्या अनुभव गरेका छन्, विद्यमान इन्टरनेटएक्प्लोररपुस्तकचिनोहरूआयातगर्नुहोस् देखि सीधा माथि सरेका हुन भन्ने विश्वास गरिन्छ, जो. तथापि, प्रायजसो यो बस पहिचान मुद्दा. बढत मा मनपर्ने अवस्थित क्रम मा, यो 'सेटिङ' मेनु खोल्न र त्यसपछि क्लिक बस आवश्यक छ. 'आयात मनपर्ने तल स्क्रल’ अर्को ब्राउजरबाट, पहिले उपयोग भएको थियो कि ब्राउजर छनौट, र अन्तमा 'आयात' क्लिक. यो तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्छ.
#10 विन्डोज 10 Cortana काम छैन
विन्डोज 10 Cortana काम छैन
केही Windows 10 प्रयोगकर्ता मुसीबत काम गर्न Cortana रही भएको छ. केही मानिसहरू Cortana आफ्नो क्षेत्र वा भाषा उपलब्ध छैन सन्देशहरू रही, एक समर्थित क्षेत्र मा जा र समर्थित भाषा प्रयोग बावजुद. अन्य Cortana पूर्वनिर्धारित मा छैन फेला, या ठीक काम छैन.
सबै को पहिलो, मारा प्रारंभ > Cortana > नोटबुक र तपाईं र बन्द Cortana टगल गर्न सक्नुहुन्छ.
मा एक नजर लिनुहोस् सेटिङ > समय & भाषा. तपाईं यी भाषाहरूको एक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक - चिनियाँ (सरलीकृत), अंग्रेजी (ब्रिटेन), अंग्रेजी (U.S.), फ्रान्सेली, इटालियन, जर्मन, र स्पेनिश, र आफ्नो बोली भाषा प्याक स्थापित छ कि. तपाईं पनि चीन हुन आफ्नो देश वा क्षेत्र आवश्यकता, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, संयुक्त राज्य, वा संयुक्त राज्य अमेरिका.
#11 विन्डोज 10 OneDrive प्लेसहोल्डर्स गएका
विन्डोज 10 OneDrive प्लेसहोल्डर्स गएका
माइक्रोसफ्ट बाटो बादल जगेडा सेवा भनेर परिवर्तन भएको छ, OneDrive, Windows मा काम गर्दछ 10. मान्छे को एक धेरै प्लेसहोल्डर्स भनेर पत्ता लगाउन irritated छन्, मूलतः व्यक्तिगत फाइल पूर्वावलोकन बादल भण्डारण थिए, हटाइएका छन्. Ostensibly, केही मानिसहरू प्लेसहोल्डर्स द्वारा भ्रमित थिए र फाइलहरू स्थानीय भण्डारण थिए भन्ठाने यो गरियो. प्रणाली अब एक चयन समन्वयन आधारित छ, जो व्यक्तिगत फाइल सिङ्क गर्न सक्षम हुन मन पर्यो जो केही मानिसहरू खुसी छैन, विशेष गरी सीमित भण्डारण अन्तरिक्ष संग उपकरणमा काम गर्दा.
वेब ब्राउजर मार्फत जानुहोस् र तपाईंले चाहेको व्यक्तिगत फाइल फेला.
तपाईं फाइल अन्वेषक मा एक ड्राइव रूपमा नक्शा सक्छ. तपाईंको ब्राउजर मा OneDrive मा प्रवेश गर्नुहोस र क्लिक फाइल त्यसपछि सीआईडी ​​नम्बर प्रतिलिपि (यो ठेगाना पल्ट मा एक नम्बर द्वारा अनुशरण = सीआईडी ​​भन्नेछन्). यस उदाहरणका लागि गरेको यो सीआईडी ​​= 435rty भन्छन् भन्न गरौं. खुला फाइल एक्सप्लोरर, जानुहोस् यो पीसी, र क्लिक मानचित्र नेटवर्क ड्राइव, "एक पत्र चयन र त्यसपछि पेस्टhttps://d.docs.live.net/435rty". कहाँ 435rty आफ्नो सीआईडी ​​नम्बर छ. साइन-पुन: जडान जाँच गर्नुपर्छ. साइन इन गर्न आवश्यक छ, तर त्यसपछि तपाईं फाइल एक्सप्लोरर मार्फत आफ्नो OneDrive पहुँच गर्न छौँ, तर सावधान - यो एक बिट ढिलो छ.
नोट : यो अझै पनि प्रगति मा एक काम छ, यसैले यो तपाईं महत्त्वपूर्ण छ भने, यो बारेमा OneDrive टीम बताउन. तपाईं सुझाव गर्न सक्छन् OneDrive वेबसाइट. तिनीहरू भविष्यमा अद्यावधिक मा फिर्ता प्लेसहोल्डर्स वा केही वैकल्पिक ल्याउन सक्छ.
#12 विन्डोज 10 फोल्डर असफल
Windows 10 फोल्डर असफल
केही प्रारम्भिक Windows 10 प्रयोगकर्ता भनेर सुझाव Windows 8 एक सन्दर्भमा नयाँ परिचालन सिस्टम गर्न उच्च छ. Windows मा समावेश गरिएको छ भन्ने ईमेल आवेदन 10 विद्यमान ईमेल आयोजन गर्दा वर्तमान प्रयोगकर्ता फोल्डरसिर्जनागर्दैछ बनाउन अनुमति छैन. यो धेरै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा एक तुच्छ मुद्दा को कुरा विचार हुन सक्छ, जबकि, यो गुनासो गर्न कुनै समाधान वर्तमान छ.
#13 विन्डोज 10 मेल मुद्दा
विन्डोज पूर्वावलोकन गर्नुभएको थुप्रै 10 संस्करण मा छ कि विन्डोज मेल उपलब्ध भन्न 8.1 उच्च थियो. तपाईं फोल्डरहरू र फोल्डरसिर्जनागर्दैछ बनाउन किनकी यो छ, जो तपाईं Windows मा मेल अनुप्रयोग संग के गर्न सक्दैन 10 (कम्तिमा अब को रूपमा). अधिक ईमेल अनुकूलित गर्न चाहने मान्छे सट्टा थन्डरबर्ड प्रयोग गर्दै, जो Windows राम्रोसँग काम गर्दछ 10.
#14 विन्डोज 10 अधिक ब्यान्डविथ खपत मुद्दा
विन्डोज 10 अधिक ब्यान्डविथ खपत मुद्दा
Windows मा 10 पूर्वनिर्धारित सक्षम छ कि अपडेट वितरण अधिक उपयोग सुविधा. यस कार्यक्षमता स्वतः पाहुना कम्प्यूटर प्रयोग र इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र अन्य Windows गर्न अद्यावधिक प्रसारण गर्न कि समस्या छ 10 पीसी प्रयोगकर्ता
विन्डोज 10 प्रयोगकर्ता म्यानुअल बारी-बन्द गर्न सुविधा रोज्न सक्नुहुन्छ, जसबाट अत्यावश्यक गतिविधिहरूको लागि महत्वपूर्ण ब्यान्डविथ retaining. विन्डोज अपडेट वितरण अधिक उपयोग निष्क्रिय पार्नुहोस् गर्न, तलका चरणहरू:
चरण 1: खुला सेटिङ
चरण 2: Windows यस अपडेट खण्ड नेभिगेट गर्नुहोस्
चरण 3: विकसित चयन
चरण 4: अद्यावधिक चयन वितरित कसरी छनोट चयन
चरण 5: बन्द गर्न टगल सेट
विन्डोज स्थापना पछि 10, प्रयोगकर्ताहरु लाई Microsoft को अद्यावधिक कि याद गर्नुपर्छ, र देखि अपडेट प्राप्त र सेट छ मेरो स्थानीय नेटवर्क मा पीसी गर्न पूर्वनिर्धारित अद्यावधिक पठाउन, इन्टरनेटमा र पीसी.
माइक्रोसफ्ट को विन्डोज अपडेट वितरण Customisation सुविधा आवश्यक बिस्तारै-तल छैन भनेर एक पाहुना पीसी इन्टरनेट जडान यसो गरेको छ, तर केवल सीमित ब्यान्डविथ प्रयोग गर्नेछ.
#15 विन्डोज 10 जडान मुद्दाहरू
विन्डोज 10 जडान मुद्दाहरू
केही Windows 10 प्रयोगकर्ता पनि वाइफाइ नियमित आधार मा बाहिर काटन छ complaining छन्. यो कुनै पनि परिचालन सिस्टम वा मिसिन संग असामान्य छैन, तर Windows को मामला मा 10 reconnection समस्याको त्यहाँ भएको. यो वास्तवमा Windows को धेरै संस्करणहरु मार्फत एक विशेष असामान्य मुद्दा छैन, र यो केवल एक सरल रिबुट आवश्यकता ठिक. यो Windows संग पहिले एक मुद्दा थियो7र विन्डोज 8, र एकदम सरल फैशन हल गर्नुपर्छ भनेर कुरा हो.
यो पनि विन्डोज केही प्रारम्भिक adopters द्वारा सुझाव गरिएको छ 10 वाइफाइ साझेदारी असक्षम वायरलेस जडान सक्षम कि ​​एकदम अधिक स्थिर हुन. यो workaround आधिकारिक माइक्रोसफ्ट द्वारा प्रमाणित भएको छैन, तर वाइफाइ फेरि Windows मा साझेदारी असक्षम एक मुद्दा देखिन्छ भने 10 एक अल्पकालीन तय हुन सक्छ.
#16 विन्डोज 10 वाइफाइ अस्थिर, ढिलो, वा जडान छैन
विन्डोज 10 वाइफाइ अस्थिर, ढिलो, वा जडान छैन
विन्डोज को एक धेरै 10 प्रयोगकर्ता वाइफाइ संग मुद्दाहरू रिपोर्ट छन्. केही मानिसहरू लागि यो ढिलो छ या intermittently जडान आउँछ, अरूलाई मुसीबत वाइफाइ सबै काम गर्न रही गर्दै.
बन्द र फेरि आफ्नो राउटर र आफ्नो कम्प्यूटर बदल सुरु.
तपाईं वाइफाइ सबै काम गर्न प्राप्त गर्न सक्दैन भने त तपाईं सवारीचालक समस्या हुन सक्छ. आफ्नो नेटवर्क एडप्टरका निर्माता संग जाँच र तपाईं नवीनतम चालक भन्ने सुनिश्चित. तपाईं अन्य कम्प्युटर मा डाउनलोड र USB Flash Drive मार्फत स्थापना गर्न हुन सक्छ.
राउटरमा पनि नवीनतम फर्मवेयर छ सुनिश्चित. तपाईं निर्माता वेबसाइटमा यसलाई पाउन छौँ.
जानुहोस् सेटिङ > नेटवर्क & इन्टरनेट > वाइफाइ. सुनिश्चित कि स्वतः जडान बक्स तपाईं जडान गर्न चाहनु नेटवर्क लागि गरीएको छ.
जानुहोस् सेटिङ > नेटवर्क & इन्टरनेट > वाइफाइ > वाइफाइ सेटिङहरू प्रबन्ध > ज्ञात नेटवर्क व्यवस्थापन र आफ्नो नेटवर्क छनौट, त्यसपछि क्लिक भूल. मिसिन रिबुट र ताजा जडान गर्न नेटवर्क विवरण प्रविष्ट.
#17 विन्डोज 10 आफ्नो वाइफाइ सम्पर्क संग शेयरों
विन्डोज 10 आफ्नो वाइफाइ सम्पर्क संग शेयरों
सुविधा र सुरक्षा बीच फेला एक सन्तुलन सधैं त्यहाँ छ, तर केही मानिसहरू माइक्रोसफ्ट नयाँ वाइफाइ अर्थमा सुविधा संग सीमा overstepped छ महसुस. आधारभूत विचार यो तपाईंको वाइफाइ पासवर्ड साझेदारी गर्न एउटा सजिलो र स्वचालित तरिका प्रदान छ (पूर्णतया गुप्तिकरण) सम्पर्क आउटलुक बाट sucked संग, स्काइप, या फेसबुक. समस्या के तपाईं आफ्नो फेसबुक "मित्र" हरेक एक आफ्नो वाइफाइ नेटवर्क पहुँच प्रदान गर्न चाहँदैनन् भन्ने छ.
जानुहोस् सेटिङ > नेटवर्क & इन्टरनेट > वाइफाइ > वाइफाइ सेटिङहरू प्रबन्ध र तपाईं नेटवर्क बन्द साझेदारी टगल गर्न सक्नुहुन्छ, वा आउटलुक समावेश गर्न छनौट, स्काइप, या फेसबुक.
तपाईं पनि यहाँ तपाईंको सम्पर्क द्वारा साझा नेटवर्क जडान गर्न चाहे तय गर्न सक्छन्, जो महत्त्वपूर्ण छ, किनकी, माइक्रोसफ्ट भन्छन्, "सम्झना, सबै वाइफाइ नेटवर्क सुरक्षित छन्। "
आफ्नो चासो कम्पनी नेटवर्क बारेमा छ भने, वा आफ्नो सञ्जालमा अरू कसैले बाहिर अप्ट छैन, त्यसपछि तपाईं पनि आफ्नो नेटवर्क नाम पाठ "_optout" थप्न सक्नुहुन्छ (SSID), तर माइक्रोसफ्ट आफ्नो नेटवर्क वाइफाइ अर्थमा लागि रोजेका-बाहिर सूची थपिनेछन् लागि यो धेरै दिन लाग्न सक्छ भन्छन्.
#18 विन्डोज 10 ब्लुटुथ काम छैन
विन्डोज 10 ब्लुटुथ काम छैन
एकदम केहि Windows 10 प्रयोगकर्ता मुसीबत ब्लुटुथ राम्ररी काम गर्न रही गर्दै. यो आफ्नो किबोर्ड प्रभावित सक्छ, माउस, हेडफोन, ब्लुटुथ मार्फत आफ्नो कम्प्युटरमा जडान कि अरू र केहि.
जानुहोस् सेटिङ > उपकरणहरू र सुनिश्चित ब्लुटुथ टगल.
आफ्नो ब्लुटुथ सहायक पूर्णतया आरोप लगाएको छ सुनिश्चित र तपाईं जोडी प्रक्रिया निम्न छन्. कहिलेकाहीं तपाईं उपकरण पत्ता बनाउन एक बटन तल पकड छ. विवरण लागि निर्माता संग जाँच.
यो एक चालक समस्या छ कि उचित मौका त्यहाँ छ. तपाईं नवीनतम चालक भन्ने निर्माता संग जाँच गर्न चाहनुहुन्छ छौँ, विशेष गरी विन्डोज देखि सीधा कूद हुनुहुन्छ भने7गर्न 10.
केही मानिसहरू रिपोर्ट छन् कि तपाईं संग एक मुद्दा छौं उपकरण लागि चालक अस्थापना, आफ्नो मिसिन पुन: बुट, र त्यसपछि यो पत्ता लगाउन र चालक चाल गर्नेछन् स्थापना स्वतः माइक्रोसफ्ट दिँदै.
#19 विन्डोज 10 मुद्रक प्रतिक्रिया छैन
विन्डोज 10 मुद्रक प्रतिक्रिया छैन
भने, उन्नयन पछि, तपाईं आफ्नो मुद्रक काम छैन भनेर पत्ता लगाउन, तपाईं सारा स्थापना प्रक्रिया शुरू गर्न सक्छ.
सहज जडान सुनिश्चित गर्न आदेश, सबै, साथमा हार्डवेयर को पनि चालक, अपग्रेड को अग्रिम अद्यावधिक गर्नुपर्छ. निश्चित विन्डोज संगत भन्ने मुद्रक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ बनाउन 10.
#20 विन्डोज 10 विन्डोज स्टोर खोल्न सक्दैन वा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
विन्डोज 10 विन्डोज स्टोर खोल्न सक्दैन वा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
मान्छे को धेरै विन्डोज गर्न अद्यावधिक पछि Windows पसल समस्याहरु मा हिड रहे तापनि रूपमा यो देखिन्छ 10. केही मानिसहरू लागि यो सबै खोल्न हुनेछ, अरूको लागि यो वास्तव अनुप्रयोगहरू वा अनुप्रयोग अपडेट डाउनलोड गर्न असम्भव साबित गर्नुपर्छ. यो ढिला अनुप्रयोग डाउनलोड र अद्यावधिक व्यस्त सर्भर को एक परिणाम हो कि एक मौका त्यहाँ छ, तर तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू छन्:
प्रेस विन्डोज + आर र त्यसपछि टाइप EXE बक्स र प्रेस मा दर्ज. कि त काम आफ्नो डाउनलोड लाईन मेटाउन र फेरि प्रयास गर्दैन भने. केही मानिसहरू यो केही प्रयास पछि लागि काम भन्ने रिपोर्ट.
तपाईं सबै मा विन्डोज स्टोर पहुँच गर्न सक्दैन भने तपाईं गलत क्षेत्र सेट कारण यो हुन सक्छ. जानुहोस् सेटिङ > समय & भाषा र तपाईं देश यो सेट निश्चित तपाईं वास्तवमा हुनुहुन्छ बनाउन.
यो निश्चित हो कि गलत समय सेटिङहरू तल छैन पनि बनाउन लायक छ. मा एक नजर लिनुहोस् सेटिङ > समय & भाषा र निश्चित सबै सही देखिन्छ बनाउन.
#21 विन्डोज 10 न्यून पारिएका गर्दा छेउको संगीत स्ट्रीम छैन
विन्डोज 10 न्यून पारिएका गर्दा छेउको संगीत स्ट्रीम छैन
छेउको एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग छ किनभने, यसको कार्यहरू यो हल्कासित गर्नुपर्छ जब निलम्बित छन्. तपाईं यो संगीत ओइरिरहेका हुँदा यो साँच्चै कष्टप्रद छ.
कुनै तय यस को लागि छ, तपाईं अन्य गतिविधिहरूको लागि तपाईंको उपकरण प्रयोग गर्दा यो कुरा सुन्न योजना भने त तपाईं बस अर्को स्रोतबाट आफ्नो संगीत स्ट्रीम छ.
#22 विन्डोज 10 मुश्किल टचस्क्रीन
विन्डोज 10 मुश्किल टचस्क्रीन
विन्डोज पूर्वावलोकमा केही प्रयोगकर्ताका 10 आफ्नो मोबाइल उपकरणहरू मा टचस्क्रीन क्षमता रूपमा intuitively कार्यात्मक तिनीहरूले हुनुपर्छ रूपमा छैनन् भन्न. उदाहरणका लागि, यो तान्नुहोस् गर्ने प्रयास गर्दा एक सञ्झ्यालको किनारा सम्झना गर्न सजिलो छ, र प्रतीक केही आफ्नो औंला प्याड संग बुझ्न धेरै सानो हो.
दुर्भाग्यवश, यो जनावरको बस प्रकृति छ. तपाईं यस finicky समस्या हटाउन मदत गर्नेछ भन्ने अभ्यास भन्दा अन्य धेरै साँच्चै त्यहाँ छैन.
#23 विन्डोज 10 कष्टप्रद पप-अप
विन्डोज 10 कष्टप्रद पप-अप
अन्तमा, सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ता विन्डोज स्थापना गर्न प्रयास गर्दा रिपोर्ट छन् 10 तिनीहरूले एक विशेष रिस सन्देश सामना गर्दै. यो पप-अप विन्डो कुनै पनि सफ्टवेयर कम्पनी कहिल्यै प्रयोगकर्ता को कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छ कि कम से कम उपयोगी सल्लाह केही प्रदान. प्रश्न मा विन्डो बस "कुरा भयो" भनेर भन्छ, र त्यसपछि बताउँदै यो अवधारणा मा elaborates “कुरा भयो – माइक्रोसफ्ट – कुरा भयो। "
स्वाभाविक यस सामाजिक मिडियामा धेरै mirth र ममलाई-निर्माण भेटे छ, तर विवाद र विलास बावजुद धेरै मानिसहरू यो त्रुटि देखि व्युत्पन्न छन् कि, अभ्यास मा यो साँच्चै एक विशाल समस्या छैन. यो मुद्दा Circumnavigating बस अस्थापना र सफ्टवेयर पुनर्स्थापित एक मामला छ, र मामलाहरु भारी बहुमत यो admittedly कष्टप्रद सन्देश कुनै पुनरावृत्ति त्यहाँ भएको छ.
#24 विन्डोज 10 बाध्य अद्यावधिक junkware लागि पोर्टल बनाउन
विन्डोज 10 बाध्य अद्यावधिक junkware लागि पोर्टल बनाउन
विन्डोज 10 यो सिस्टम अपडेट गर्न आउँछ जब प्रयोगकर्ता एक विकल्प दिन छैन. स्वतः तिनीहरूलाई स्वीकार. एक हात मा यो कम्प्युटर तदनुसार अद्यावधिक को आफ्नो व्यापार को बारे मा जाने गर्छ. यो पनि कम्प्युटर सुरक्षा पैच अप टु डेट छ कि सुनिश्चित, तर स्वचालित अपडेट एक प्रयोगकर्ताको पीसी वा मोबाइल उपकरण मा वस्तुतः यो चाहनुहुन्छ जो-खुवाउन दवाब माइक्रोसफ्ट सक्षम.
कुनै तय यो साँच्चै त्यहाँ छ, तपाईं Windows बोर्ड नभएसम्म 10 उद्यम, प्रयोगकर्ता अनुमति वा अद्यावधिक अस्वीकार दिन्छ कि माइक्रोसफ्ट गरेको व्यापार समाधान.
#25 विन्डोज 10 कुनै पनि अधिक मुक्त छैन
विन्डोज 10 कुनै पनि अधिक मुक्त छैन
यो एक कोमल चेतावनी छ यो यति धेरै समस्या छैन. विन्डोज 10 एक मुक्त उन्नयन रूपमा तर केवल एक वर्षका लागि उपलब्ध हुनेछ. यसको लागि retails कि पछि $119.
एक वर्ष लामो समय जस्तै महसुस, तर प्रविधिको दुनिया मा यो एक आँखा को एक झिम्काइ छ, त्यसैले यो पनि लामो समय को लागि बन्द अपग्रेड राख्नु छैन … प्रारंभिक सनक बाहिर ironed गरौं बस लामो पर्याप्त.
Windows विन्डोज 10 पछिल्लो पोस्टSamsung अर्को ग्यालेक्सी स्मार्टफोन अगस्ट 13 घोषित गरिनेछअर्को पोस्ट Caseguru उत्पादन तपाईं प्रेम, साथै Amazon.com मा उपलब्ध हुनेछ! सम्बन्धित पोस्ट
15 सैमसंग ग्यालेक्सी S6 / S6 बढत समस्याहरू – तिनीहरूलाई यकिन गर्न कसरी
ग्यालेक्सी S6 किनारा सुपरमैन लिमिटेड संस्करण – आधिकारिक Unboxing
आईफोन6पर्दा प्रतिस्थापन मा गरेका5मिनेट
जुन 25, 2015
स्यामसंग ग्यालेक्सी S3 ग्लास पर्दा प्रतिस्थापन मर्मत परिवर्तन
हाम्रो साथमा कनेक्ट
हाम्रो समाचार पत्रको सदस्यता लिनुहोस्
पहिलो नाम	ई-मेल ठेगाना
सुझाव र ट्यूटोरियल
Copyright 2015 Caseguru इंक | सबै अधिकार सुरक्षित
पिन यो शेयर